Ulo olu nke PCAni ebe Bug na Vista | Martech Zone
Oge ọrụ maka PCAnywhere Bug na Vista
Satọde, 7 Juun 2008 Friday, July 10, 2009 Douglas Karr
Ahụbeghị m LiveUpdate ma ọ bụ akwụkwọ na ahụhụ a, mana o doro anya na ọ na-emetụta ndị ọzọ PCAnywhere Vista ọrụ dị ka nke ọma. Kama ichere Symantec iji weta ndozi, achọpụtara m na ntụgharị nsụgharị, Winawe32.exe na-ebute nsogbu ahụ.
Right-pịa gị taskbar na họrọ Task Manager.
Họrọ Filiks taabụ.
Chetara Winawe32.exe ma pịa Usoro njedebe.
Mgbe ịdọ aka na ntị, pịa Ọ dị mma.
Mechie PCAni ebe nile.
Megharịa PCA ebe ọ bụla ma ị ga-ahụ Remote gị niile ugbu a.
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ Symantec doziri ahụhụ a na PCAnywhere, ọ bụ ezigbo ihe mgbu.
Tags: androidkaadịimirikitiihe nkwalite mmemmechọta akaụntụ twitterụlọ ọrụ ekwentịn'èzí mgbasa ozieriri draịva
Won gaghị na-ede blọgụ ruo mgbe ebighị ebi
WordPress: Jikwaa Mgbasa ozi na Ad-minister
Aug 22, 2008 na 5: 48 AM
Edoziwo nsogbu a na pcEni ebe 12.5. Ugbu a na beta na http://betanew.altiris.com/BetaProducts/PCAnywhere125Enterprise/tabid/148/Default.aspx
Lee ihe na-eme:
onye njikwa pcAnywhere (winaw32.exe) weputara SessionController.exe. Ọ bụrụ na winaw32.exe na-apụ tupu nnọkọcontroller.exe ebugo, mgbe ahụ ọ na-ebute na oghere oghere. Nke a nwere ike ime ma ọ bụrụ na sistemụ ahụ nọ n'ọrụ n'oge pcaw32.exe na-ebupụta.
Ọ bụrụ na nke a na-eme mgbe niile, gbalịa ịmalite SessionController.exe na mbụ, chere sekọnd ole na ole wee malite pcAnywhere njikwa. Nke a kwesịrị ịrụ ọrụ.
Sep 16, 2008 na 6: 36 AM
E doziwo nsogbu a na pc ebe ọ bụla mbipute 12.5 beta. Y nwere ike ịnwale ọnọdụ a ọbụlagodi ma ọ bụrụ na usoro gị ji ọrụ n'aka.
Sep 28, 2008 na 10: 49 AM
Yabụ, 12.1 nke m kwụrụ ụgwọ anaghị arụ ọrụ, na enweghị aha patch dị na symantec.com. Ka m chee, ụdị 12.5 ahụ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa a ọzọ, ma ugbu a, tufuo ndị ahịa. PcAnywhere nwere, n'ime otutu afọ gara aga, ghọrọ ihe nzuzu, mmemme na nnwale na-adịghị mma, enweghị ikike na ibu ọrụ pụtara ìhè maka onye dịka m nke edegoro n'asụsụ 8 ma kwado usoro maka ndụ.
Ọkt 22, 2008 na 4:57 PM
Companylọ ọrụ anyị ejirila pcAnywhere maka nchịkwa dịpụrụ adịpụ ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ ugbu a. The chinchi ke ndondo emi nsụgharị (11.0 na elu) e-esiwanye na-akụda mmụọ, na anyị achọpụtala na Enterprise version nke RealVNC na-arụ otu ọrụ, na-eji obere usoro ego, maka obere ego kwa wụnye doesn't na ọ dịghị enwe iwe nke naanị inwe ike ịnabata otu nnọkọ n'otu oge.
Ikwu n'uju: Iji “Kpọọ Remote” atụmatụ nke pcAnywhere nnabata jikọtara ndị ahịa ahụ, na otu Remote enweghị ike ịnabata ndị ọbịa 2 “kpọọ” ya n'otu oge. N'ịbụ onye na-edebanye aha na netwọk, nke a enweghị isi nye m. VNC enweghị mbipụta a, ọ dị ka "ọ na - arụ ọrụ", ọbụlagodi igwe ndị pcAnywhere agaghị arụnyere.
The Enterprise version nke RealVNC na-arụ ọrụ na Vista na-enweghị nsogbu, ọ bụ ezie na free version “usu” ike na-agba ọsọ dị ka ọrụ na Vista (na-ege ntị dị mma, ma ozugbo resets njikọ oge ọ bụla ị jikọọ). Na mgbakwunye, VNC bụ n’ezie ikpo okwu ma na - arụ ọrụ “n’ime igbe” na gburugburu Linux eserese, ebe pcAnywhere ụsụụ ndị agha nwere ike na-agba ọsọ Windows (tm).
Chei, nke a na-ada ka plọg. Agbanyeghị, anaghị m emetụta RealVNC n'ụzọ ọ bụla karịa ịbụ onye ahịa nwere afọ ojuju, mgbe pcAnywhere foibles na quirks manyere anyị ịchọta ngwaahịa nchịkwa ọzọ. Anyị ka na-eji pcAny n'ebe ọ bụla na ndị ahịa anyị arụnyere, mana anyị anaghị azụta ikikere ọhụụ ọ bụla n'aka ha.
Feb 11, 2009 n’elekere 12:53 nke abali
Nnukwu, nsụgharị karịa 12.1 agaghị agba ọsọ na Vista, yabụ azụrụ m 12.1. Achọpụtala m na enweghi mpempe akwụkwọ maka 12.1, n'eziokwu, echeghị m na 12.1 na-akwado ọzọ, n'agbanyeghị na ọ dị n'ahịa ọ bụghị ogologo oge gara aga, mana ị nabata ma gaa kwụọ ụgwọ maka ụdị ọzọ 12.5 ugbu a.
Mar 16, 2009 na 7: 36 AM
mab, ị kwesịrị inwe ike ịnweta 12.5 n'efu. Mmelite nke na-anaghị abawanye nọmba mbipute bụ isi (12) na-abụkarị n'efu. Probably ga-enwerịrị ịkpọtụrụ nkwado ha n'agbanyeghị, ọ bụ ihe mgbu mana m welitere 12.0 na 12.1 n'ụzọ dị otu a.
Sep 24, 2009 na 5:05 PM
Ọbụna 12.5 bụ flakey. M ga-agbadata ọkwa nke remod garphic ụdịdị iji malite ma ọ bụ nwee ntụkwasị obi na-ejikọ njikọ. Naanị echere oge ụfọdụ, m ga-enyocha VNC ka ọ bụrụ onye nnọchi. PCA anwụọla naanị m. Ọ dị ka Symantec anaghị akwado ya ma ọ chọghị ịma.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara maka mmelite Symantec PCA ọ bụla, mkpọ ọrụ, wdg maka 12.5 M ga-achọ ịma banyere ya.